उमेर अनुसार नुनसेवन, कुन उमेरमा कति गर्ने ? - ज्ञानविज्ञान
उमेर अनुसार नुनसेवन, कुन उमेरमा कति गर्ने ?
4 months ago biplov
हामी बाँच्नका लागि खाना खान्छौ । त्यहि खानाले हामीलाई स्वस्थ बनाएर काम गर्न, हिँडडुल गर्न शक्ति दिन्छ । खाना बिना हामी रहन सक्दैनौ । केहि क्षण खाना नखादा नै हामी कमजोर भएको अनुभव गर्छौं ।
यद्यपि, खाना कति खाने भन्ने बारेमा जानकारी नहुँदा हामीले खाएको खानाले हामीलाई नै हानी पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले खाना खाँदा कति र कसरी खाने भन्ने बारेमा जानकारी हुनु आवश्यक छ ।
आज हामी खानेकुरालाई स्वादिलो बनाउन सहयोग गर्ने र स्वास्थ्यको लागि पनि अति नै आवश्यक पर्ने नूनको बारेमा केही जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौं ।
जसरी स्वास्थको लागि नुननभइ नहुने कुरा हो, त्यसरी नै आवश्यकता भन्दा धेरै नूनको प्रयोग स्वास्थको लागि हानिकार पनि हुन्छ । स्वास्थ रहनका लागि नूनको मात्रामा सन्तुलन राख्न आवश्यक छ ।
नुनले हाम्रो शरीरमा पानीको स्तरलाई नियन्त्रण गर्नुको साथै पाचन प्रक्रिया र मिर्गौंलालाई शरीरमा राम्रोसंग काम गर्न सहयोग गर्ने, सुगर कम गर्ने, तनाव र अन्य भावनात्मक समस्याहरुबाट पनि राहत पुर्‍याउने काम गर्छ ।
नुनले हाम्रो शरीरमा मांसपेशीलाई सहि तरीकाले काम गर्न सहयोग गर्छ । हाम्रो शरीरमा नूनको कमि भयो भने विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । जस्तै- कोलेस्टल बढ्नु, थकाइ लाग्नु, चक्कर लाग्नु, भोक नलाग्नु तथा ब्लड प्रेशर लो हुने जस्ता समस्या उत्पन्न हुन्छन् ।
नुनको बढि मात्रा हानिकारक
नुन शरीरको लागि आवश्यक त हुन्छ नै, तर अधिक मात्रामा नूनको प्रयोगले धेरै रोगहरु उत्पन्न हुन्छन् । नुन धेरै मात्रा सेवन गर्नाले हाइपर टेन्सन, हाई ब्लड प्रेसरको खतरा बढ्छ । जसको कारण हार्ट अट्याकको खतरा बढ्छ ।
नुनको धेरै मात्राको प्रयोगले रगतमा आइरनको मात्रा कम हुन्छ, जसका कारण एसिडिटी बढ्छ । भोक नहुँदा पनि भोक लागेको अनुभव हुन्छ, जसले शरीरमा धेरै क्यालोरी जम्मा हुन्छ र मानिस मोटाउन थाल्छ ।
नुनसन्तुलित गर्न के गर्ने ?
खानामा धेरै नूनको प्रयोग नगर्ने
बढि नुन भएका खानेकुरा खानु हुँदैन
दहीमा नुनहालेर खानु हुँदैन
तारेको खानेकुरा कम खानुहोस्
नुननहालेको सलादको प्रयोग गर्नुपर्छ
पापड, अचार, चिप्स, नुनहालेको बदाम, पपकर्न, सोया सस, केचअप तथा प्रोसेस्ड फुड अत्यन्त कम खानुपर्छ ।
मुटु, मृगौला र फोक्सोको समस्या भएका व्यक्तिले सोडियम कम भएको नुनखानु पर्छ ।
सोडियम क्लोराइडको मात्रा सन्तुलित गर्नका लागि आफ्नो भोजनमा धेरै पोटासियम भएको खाद्यपदार्थ जस्तै- फलफुल र तरकारीको प्रयोग बढि मात्रामा गर्नु पर्छ ।
उमेर अनुसार प्रतिदिन नुनको सेवन
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक व्यक्तिले हरेक दिन उमेर अनुसार नूनको सेवन कम गर्नुपर्छ ।
-शून्य देखि १२ महिना सम्मकाले एक ग्राम भन्दा कम नुनको प्रयोग
-१ देखि ३ वर्षकाले २ ग्राम भन्दा कम नूनको प्रयोग
-४ देखि ६ वर्षकाले ३ ग्राम नूनको प्रयोग
-७ देखि १० वर्षकाले ४ ग्राम नूनको प्रयोग
-११ वर्ष अथवा योभन्दा माथिकाले ५ ग्राम नूनको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
हाम्रो शरीरमा भएको कूल नूनको २४ प्रतिशत अंश हड्डीमा हुन्छ । नूनमा ४० प्रतिशत सोडियम तथा ६० प्रतिशत क्लोरीन हुन्छ । आयोडिनको कमिले हुने रोगलाई हटाउनका लागि आयोडिनयुक्त नूनको विश्वब्यापी प्रयोग हुन थालेको पनि वर्षौं भैसकेको छ ।
बिहानै ताताे पानीमा थाेरै नुन राखेर पिउनुका यस्ता छन् फाइदा जान्नुहाेस्
खानामा रिफाइन नुनको बढी प्रयोग गर्दा शरिरमा धेरै हानी हुन्छ । यदि रिफाइन नगरिएको नुन प्रत्येक दिन बिहान तातो पानीमा हल्का नुन राखेर पिउदा शरिरलाई फाइदा हुन्छ । तर नुन धेरै राख्नु हुँदैन । धेरै नुन खाँदा उच्च रक्तचापको खतरा हुन्छ । यदी तपाईलाई कुनै रोग लागेको छ भने चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र नुन पानी पिउनुहोला ।
नुन पानीको स्वास्थ्यमा हुने फाइदा यस प्रकार छन्
यसमा क्यालिसयम पाइने हुनाले हड्डी बलियो हुन्छ ।
यसमा एन्टि व्याक्टेरियल तत्व हुन्छ । शरिरमा भएका खतरनाक व्याक्टेरियाको नाश हुन्छ ।
यसमा सल्फर वा क्रोमियल हुन्छ जसले छाला सफा र नरम बनाउछ ।
मोटोपन न्यून गर्छ
यसले शरिरको कोषहरुमा आवश्यक पोषण तत्व पर्याउछ र मोटोपन घटाउछ ।
पाचन पक्रियामा सुधार
नुनपानीले शरिरको सेलीवरी ग्लान्डलाई सक्रीय गर्छ । यो ग्लान्डले पाचनमा सुधार ल्याउछ
यसले थाइराड हर्मनलाई नियन्त्रण गर्छ । थाइराईडाको समस्या न्यून हुन्छ ।स्वास्थ्य खबरपत्रिकामा खबर छ ।
निद्राको समस्या समाधान
यसले शरिरको कार्टिसोल र एड्रोनलाईन जस्तो खतरनाक स्ट्रेस हर्मनलाई घटाउछ जसका कारण राम्रो निन्द्रा लाग्छ ।
यसले पेटमा ग्यास जम्मा हुनबाट रोक्छ । नियमित पिउदा एसिडिटिको समस्या घट्छ ।
नुनका पनि यस्ता फाइदा, सुनेर हुनुहुनेछ अचम्मित !
बदलिँदो जीवनशैलीले हाम्रो खानपान पनि बदलिइरहेछ । खानपानसँगै बानी व्यहोरा पनि बदलिएका छन् । हामीलाई थाहा छ, खाना खाने टेबलदेखि फास्टफुडसम्म नुनको उपस्थिति हुन्छ । सेतो दानेदार नुनले केवल तपाईंको खानपीनलाई मात्रै स्वादिलो बनाउँदैन, यसले त तपाईंका विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई पनि समाधान गर्न मद्दत गर्दछ ।
भनिन्छ, चिनी पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ । त्यस्तै, नुन पनि न बढी खानु हुन्छ न कम । सन्तुलित रुपमा नुनको सेवन गर्नाले हामीलाई के कस्तो फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ, यहाँ केही जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
नुनले चम्काउँछ नङ
यदि तपाईं आफ्नो नङ चम्किलो तथा मुलायम बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसको लागि तपाईंले नुन, बेकिंग सोडा र कागतीको रसको पेस्ट बनाएर त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो नङमा मसाज गर्न सक्नुहुन्छ । नङलाई चम्किलो बनाउन यो क्रमलाई हप्तामा एकपटक दोहोर्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
यदि तपाईं ओठ वरिपरिको छालाका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई नुनले राहत दिनेछ । यसको लागि बिहानै ब्रस गर्नुभन्दा अगाडि नै अलिकति नमक लिनुहोस् र ओठ वरिपरिको छालामा राखेर थिच्नुहोस् । यसबाट तपाईंलाई धेरै नै जलन हुनसक्छ तर केही समय सहेपछि सादा पानीले कुल्ला गर्नुहोस् ।
यदि तपाईंलाई ज्वरो आइरहेको छ भने चिसो पानीमा नुन मिसाउनुहोस् र त्यसमा नरम कपडा भिजाउनुहोस् अनि त्यसलाई पट्टीको रुपमा आफ्नो निधारमा राख्नुहोस् । यसबाट छिट्टै ज्वरोले छाड्नेछ ।
पाचन प्रक्रियामा राहत
यदि तपाईंलाई पाचन प्रक्रियासँग जोडिएको केही समस्या छ भने मोहीमा ढिका नुन र पुदिना राख्नुहोस् । यसको प्रयोगले तपाईंलाई काफी मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
तपाईंको कपालमा चायाँ छ, यसले पक्कै पनि तपाईंलाई तनाव दिन्छ । यसको समाधानका लागि १–२ चम्मा समुद्री नुन लिनुहोस् र यसलाई आफ्नो औंलाको सहयोग लिएर कपालमा लगाउनुहोस् । यसपछि कपाललाई माइल्ड श्याम्पूले धुनुहोस् । यसबाट तपाईं चायाको समस्याबाट धेरैहदसम्म मुक्त हुनुहुनेछ ।
यदि तपाईंको शरीरमा कुनै भागमा पोल्यो भने त्यहाँ नुन लगाउनुहोस् । ५ मिनेटपछि त्यसलाई सफा पानीले धुनुहोस् । यसबाट तपाईंको पीडा धेरै हदसम्म कम हुनेछ ।
यदि तपाईं मांशापेशीको दुखाइबाट पीडित हुनुहुन्छ भने यो समस्यामा पनि नुनले सघाउन सक्छ । उक लिटर पानीमा दुई तीन चम्मा चिनी र आधा चम्मा नुन अथवा कागतीको रस मिलाउनुहोस् । बिस्तारै बिस्तारै यसलाई त्यतिबेलासम्म पिउनुहोस्, जतिबेला तपाईंको मांशापेशी दुख्न छाड्दैन ।
यसको लागि तपाईंले चार चम्चा नुन र एक चम्चा आँविल तेल र आधा कागती निचोरेर मिसाउनुपर्दछ । यसलाई आफ्नो शरीरमा लगाउनुहोस् र कमसेकम १० मिनेटको लागि छाडिदिनुहोस् । यसपछि नुहाउनुहोस् । छुट्टै आनन्दानुभूति प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
यदि तपाईंको खुट्टा सुन्निएको छ भने त्यसको लागि एक ठूलो चम्मा नुनलाई तावामा तताउनुहोस् र तातेपछि कपडामा बाँध्नुहोस् । यसबाट सुन्निएको खुट्टालाई कम्तीमा पनि १० मिनेटसम्म सेक्नुहोस् । यसबाट तपाईंको पीडा तथा सुन्नाईमा पनि कमी आउनेछ । यो प्रक्रियामा नुन सेलाएमा फेरि तताएर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यदि तपाईंको शरीरका जोर्नीहरु दुख्ने समस्या छ भने नुनबाटै यस्तो दुखाईको उपचार गर्न सकिन्छ । यसको लागि तातो पानीमा नुन राख्नुहोस् र त्यसमा केही समयको लागि आफ्नो शरीरको दुखेको भागको जोर्नी डुबाउनुहोस् । यसबाट तपाईंले धेरै राहत पाउनुहुनेछ ।
खुट्टाको औंलामा नङ फसेमा
यदि तपाईको खुट्टाको औंलाको नङ छालामा गडेको छ र यसबाट समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ भने नुन तपाईंको काम आउन सक्छ । यस्तो नङ काट्न पनि समस्या हुन्छ र दुखाई पनि असाध्यै हुन्छ । यसको लागि आफ्नो खुट्टालाई तातोपानीमा नुन मिसाएर १५ मिनेटसम्म डुबाएर राख्नुपर्दछ । यसपछि खुट्टा सुकेपछि नेलकटरको सहयोगमा नङ काट्दा धेरै दुख्दैन ।
आँखाको परेलीमा इन्फेक्सन
यदि तपाइंको आँखाको किनारा वरिपरि इन्फेक्सन भइरहन्छ भने नुनले सघाउन सक्छ । यस्तो समस्यालाई हाम्रो तिर अन्धो आउने भनिन्छ । दुई चम्चा नुनलाई तावामा तताउनुहोस् । एक नमर कपडामा बाँध्नुहोस् । फेरि यसलाई आफ्नो प्रभावित आँखामा लगाउनुहोस् । तत्काल राहत मिल्नेछ ।
यदि तपाईंलाई घाँटी दुख्ने समस्या छ, गर्दन दुख्ने समस्या छ भने नुनको प्रयोग गनुसक्नुहुन्छ । यसको लागि एक गिलास तातोपानीमा एक चम्चा नुन राख्नुहोस् र कुल्ला गर्नुहोस् ।
Don't Miss it कपाल झरेर दिक्क हुनुभएको छ ? याे तरिका अपनाउनुहाेस्
Up Next फर्सी खादा शरीरमा यस्ता फाइदा हुन्छनु, जान्नुहाेस्
यस्ता मानिसहरुले जाडाेमा अदुवा खानै हुदैन
अदुवा, वैज्ञानिक वर्गीकरणअनुसार जिन्जीविरेसी परिवारमा पर्ने प्रमखु बिरुवा हो । यसको प्रयोग साधारणत तरकारी, मसला र औषधिको रूपमा आउँछ ।…
2 days ago biplov
आखिर के–के हुन् त भोक लागिरहनुका कारण ?
अनुसन्धानबाट यो तथ्य बाहिर आएको छ कि केही खास कारणले हामीलाई बारम्बार भोक लागिरहन्छ । हामी ती कारणहरु पत्ता लगाउनुको…
खानपान, घरेलु उपचार, भान्छामा औषधी
हाम्रै घरको भान्छामा हुने तरकारीहरुले यस्ता सम्म रोग ठिक पार्छन्, खाने तरिका सहित
हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, हरेक प्रकारका तरकारीहरुमा विभिन्न किसिमका औषधीय गुण पाइन्छन् । मौसम अनुसार तरकारीलाई सन्तुलन मात्रामा…
2 weeks ago mygyanbigyan
तिहारमा यसरी खान सक्छन् मिठाइ मधुमेह रोगीले
यस्तै, तिहारमा आफूले खाने खानेकुराको क्यालोरीको मात्राबारे ध्यान दिएको अवस्थामा पनि मधुमेह बढ्नबाट रोक्न सकिन्छ । यस्तै, खान मिल्यो भन्दैमा…
1 month ago biplov
सिस्नो यसरी खानुहोस्, यसरी खाए धेरै रोग रोकथाम र निदान गर्छ, पढ्नुहोस्
‘हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले’ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका यी पंक्तिमा मात्रै…
1 month ago mygyanbigyan
साङ्लो भगाउने यस्ता छन्, घरेलु उपाय
ल्वाङ : ल्वाङको गन्ध पनि साङ्लालाई मन पर्दैन । साङ्ला आउने ठाउँमा ल्वाङका कल्लीहरू राख्नुस् । यसबाहेक मट्टीतेल, नीम, पुदीना…
कुन बार जन्मिएका मान्छेसँग कस्ता-कस्ता गुण हुन्छन् ?
धेरै मानिसहरुको विश्वास छ कि जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा निकै नै प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका…
दृढ आत्मविश्वासले कसरी सफल बनाउन मद्दत गर्दछ ? जान्नुहाेस्
हामीले उहि पुरानाे खरायाे र कछुवाकाे दाैड भन्ने कथालाइ एक जीवन उपयागी कथाकाे रूपमा लिएर अाएका छाै । याे भिडियाेले…
सोमालिया विश्वकै भ्रष्ट र डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश नेपाल २९औं स्थानमा
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले विश्वको सबैभन्दा भ्रष्टचार हुने मुलुकमा सोमालिया, साउथ सुडान, उत्तर कोरिया र सिरियालाई राखेको…
कलेजो कसरी बिग्रिन्छ, जोगाउन के गर्ने ?
कलेजो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठूलो अंग हो। यो लगभग एक– साढे एक केजीको हुन्छ। कलेजोले हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने प्रोटिन…
दाह्री काट्न आउँछ ?
हामीले नियमित रूपमा दाह्री काट्ने गरेका छौं । तर दाह्री कसरी काट्दा स्वस्थकर एवं वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने जानकारी कमैलाई हुन सक्छ ।…
बिहान खाली खुट्टा हिड्नुका यस्ता छन् फाइदा, जान्नुहाेस्
नांगै पैताला अर्थात खाली खुट्टा हिँड्दा पैतालामा भरपूर मात्रामा अक्सिजन प्राप्त हुन्छ । यसले रक्तसञ्चार सहज गराएर थकान कम गराउँछ…
नुन सबैभन्दा हानिकारक, प्रेसरका बिरामीलाई औषधिको रुपमा आलस
हामी आवश्यकताभन्दा दश गुणाबढी नुन सेवन गरिरहेका हुन्छौं । चाहिने भन्दा बढी नुनको सेवनकै कारण वर्षमा चालीस लाख मानिसले जीवन…
अण्डाको बोक्राले छालालाई निकै फाइदा पुर्याउँछ, थाहा पाउनुहोस्
जो महिलाको उमेर ३० पारी छ उनीहरुले अण्डाको बोक्रालाई आफ्नो सौन्दर्य दिनचर्यामा अवश्य पनि समावेश गर्नुपर्छ । अण्डाको बोक्राको…
घरेलु उपचार (47)
भान्छामा औषधी (30)
सूचना प्रबिधि (13)